Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy Nday: Atsaharo ny fihantsiana vahoaka
Inty sy Nday: Atsaharo ny fihantsiana vahoaka
Fihantsiana vahoaka! Izany no azo ilazana ny fihetsika ny mpitondra fanjakana. Nahoana angaha, hoy ianao ? Tamin’ny voalohan’ny volana aprily, herinandro lasa izay, dia nampiharin-dry zareo tamin’ny alalan’ny tsikombakomba tamin’ireo mpandraharahan-tsolika eto ho 90 ariary isaka ny litatra ny vidin-tsolika (lasantsy tsotra sy gazoala) ary 40 ariary isaka ny litatra ny fiakarany ho an’ny solitany fandrehitra. Nisy akony goavana tany anivon’ny tambajotra ara-tsosialy isan-karazany izany satria nihoatra ny 4.000 ariary ny iray litatra amin’ny lasantsy tsotra. Ny alatsinainy faha-2 aprily takariva ihany anefa dia nisy baiko avy amin’ny mpitondra fanjakana foibe, hoy ny loharanom-baovao, fa averina amin’ny vidiny teo aloha ny saran-tsolika. Izany hoe ny vidiny nandritra ny volana martsa ihany.
Ny antony nambara dia hoe “ho fisorohana ny fipoahana sosialy (explosion sociale).”
Herinandro taorian’izay, omaly alatsinainy anefa, dia akory indray ny hatairan’ny maro raha nividy solika fa nakarin’ny mpitondra fanjakana 70 ariary isaka ny litatra indray ny saran’ny lasantsy tsotra (super sans plomb) sy ny gazoala ary 30 ariary isaka ny litatra ny fiakarany ho an’ny solika fandrehitra. Raha mitaha amin’ilay fanapahan-kevitra nampiakarana azy tamin’ny voalohan’ny volana Aprily izany dia 20 ariary no elanelan’ny fihenana tamin’ity omaly ity ary 10 ariary ho an’ny solika fandrehitra.
Lasa 4000 ariary izany nanomboka omaly ny vidin’ny lasantsy tsotra ary 3350 ariary ny litatra amin’ny gazoala raha 2430 ariary ny litatra amin’ny solika fandrehitra.
Tena fihantsiana vahoaka izany ka mila mieritreritra ny olom-pirenena. Ilay tamin’ny 2 aprily moa dia tsinjo fa tao ankatoka ny ady hevitra goavana momba ny fampankatoavana an-detrezana an’ilay tolo-dalàna fehizoro momba ny fifidianana ny fitondrana Hvm, ka nanahy mafy ny hivadihan’ny ady hevitra hitranga eny Tsimbazaza ho savorovoro, ary mety hitarika hatrany amin’ny hatezeram-bahoaka noho ny fidangan’ny vidin-tsolika, ankoatra ny kilalao maloto nataon’ny fitondram-panjakana tamin’ny kolikoly avo lenta tamin’ireo solombava “maty eritreritra”, dia iny nandraisan-dry zareo fepetra iny hoe “avereno amin’ny vidiny tamin’ny volana martsa ihany aloha ny vidin-tsolika”.
Tamin’izay aza dia efa maro ny nanamarika hoe “hay ve azo atao ihany ny tsy manondrotra ny vidin-javatra, ary ity vidin-tsolika ity no isan’ny nampiharana an’izany, rehefa manahy ny hatezeram-bahoaka ny mpitondra, ary hatezeram-bahoaka natahoran’ny mpitondra ny hionganany eo amin’ny fitantanana ny fahefam-panjakana, fa rehefa nangingina ny maro, rehefa variana tamin-javatra hafa, dia io nampiharin’ny mpitondra fanjakana io indray omaly ny fanondrotana an’ilay vidin-tsolika, fa mody nahena 20 ariary ny fiakarany”. Dia mbola hamafisinay hatrany ny fehezan-teny navoakanay teto tamin’iny fiandohan’ny volana aprily iny hoe “tsy misy goavana sy mafy toy ny vatolampy fa rehefa tsy miteny dia taingenan’ny vorona ary anaovany maloto” e !
Aiza ilay hambom-pon’ny vahoaka Malagasy tsy manaiky lembenana eo anoloan’ny tsy rariny ? Aiza ny fitiavan-tanindrazana sy fitsinjovana ny taranaka eo amin’ny vahoaka Malagasy amin’ny vanim-potoana anamparan’ny mpitondra fanjakana ny fahefana eo aminy ka ny olom-pirenena tsotra, tsy manan-tsiny, no iantefany, toa izao fanondrotana ny vidin-tsolika izao ?
Marihinay mandrakariva fa na eo aza ny fiakaran’ny vidin-tsolika eo amin’ny tsena iraisam-pirenena, ary na eo koa aza ny fitotonganan’ny sandam-bola malagasy (ariary) izay tsy maintsy misy fiatraikany amin’ny vidin-tsolika ho an’ny mpanjifa eto an-toerana, dia azon’ny mpitondra fanjakana atao ny mifehy izany.